Maxaad Ka Taqana Tariikhda Wadanka Shiinaha |
Dhibaatooyinka Tahriibka Laga Dhaxlo “Dhacdo Xanuun Badan” |TukeSomalism.com
Aqoon GuudDhaqanka, Afka Hooyo, Taariikhda Soomaaliya & DuniddaGanacsiga iyo DunidaHorumarka & Deegaanka ---OLDMaqal & Muuqaal
Ayaanle Cabdi — February 3, 2016
Shiinaha waa wadanka ugu dadka badan dunida, waxuuna ku yaallaa qaaradda Bariga Aasiya, qariiradda wadanka Shiinaha waxa ay u sameeysan tahay sida Dhul baaxad weyn oo keyn ah.
2014 tiro koob lasoo saaray waxaa lagu sheegay in dadka Shiinaha ay dhan yihiin 1.35 Billion, waana tiro koob ah oo dunidaaan lagu nool yahay mar soo martay. Luuqadda China malahan Alfabeeto laakiin waa 12.00 oo sawir ah ama Farsharaxan sawireed.
Boqolkiiba 87.4 dadka Reer Shiinaha wax diin ah ma heeystaan, halka boqolkiiba 6% ay aamisan yihiin Buddism, Islaamka ayaa celcelis ahaan dhan boqolkiiba hal. 292 luqadadood oo kal duwan ayey ku hadlaan Reer Shiinaha laakiin waa kaliya luqadooda, balse ku hadalka ayaa kalla duwan.
Wadanka Shiinaha waa wadanka ugu dhulka weyn qaaradda Aasiya, waana wadanka sadaxaad ee ugu dhulka baaxadda weyn dunidda, ajnabiga wadanka ku nool lama aqoonsan karo marka loo eego dadka wadanka u dhashay. Seynisyahaanada caalamka ayaa sheegaya Shantii qof oo meel isla istaaga 4 kamid ah waa Shiine.
Shiinaha waa mamnuuc in dumarka ay dhalaan wax ka badan 2 cunug, taas oo lalla dagaalamayo tirada dadka oo xadkeeda sii dhaafeeysa, dowladda ayaa dhaqaatiirta isbitaalada ku wargalisay in haweenka ay ka umulisiyaan hal cunug oo kaliya, haddii si dhuumasho ahna lagu dhalo 3 cunug waa ganaax iyo xukun. Sanadkii 2013 haweeneey 34 jir ah ayaa caloosha ku siday 4 cunug, waxaana laga dilay 3 kamid ah.
Shiinaha waa ka mamnuuc in dadka wadanka u dhashay iyo guud ahaanba ay isticmaalaan aaladda Internet-ka sida YOUTUBE, FACEBOOK iyo TWITTER, Dowladda ayaa go’aankaas soo saartay, waxaana loo mamnuucay in dadka ays kusoo gudbiyaan Fikrado dowladda lid ku ah.
Eera boorka caalamiga ee caasimada Beyjiiin ee dalkaas Shiinaha, waa eerabootka 2aad ee ugu weyn dunida. Siddoo kalle Barling Bridge waa buundada ugu jooga dheer dunida, waxa ay ku taalaa magaalada Barling ee wadanka Shiinaha, 1990 ayaa la dhisay.
Wadada ugu mashquulka badan dunida ayaa ku taala Shiinaha, waxaana lagu magacaabaa Manjing Road, 3 milyan ayaa maalintii oo kaliya wadadaas ku mashquulsan, waa meel dukaamo badan ku yaalan. Sidoo kale Wadanka Shiinaha ayaa leh warshadda ugu soo saarista badan dunida, waxaana siddoo kalle ay leedahay dhismaha dhaqaalaha 2aad ee dunida, marka laga soo tago dhismaha dunida ugu dheer ee Dubia.
Haddii aad ku geeriyooto oo aadan u dhalan wadanka meydkaaga waa in wadanka laga bixiyaa, waa mamnuuc in laguugu duugo ama haddii kalle 50 kun oo dollar ayaad dhiibeeysaa.
Shiinaha waxa ay caan ku yihiin fargeeto qoryo laga sameeyay oo cuntada lagu cuno. Hadii aad Shiinaha joogto oo aad rabto inaad wax ku cunto qoryahaas waakugu adkaaneeysaaa. Atooraha caanka ah Jackie chan ayaa ka dhashay Shiinaha.
Previous post SHEEKO KU SAABSAN BAARINIMADA "CALQAMAHA"